dotdotdot.frame Kufambisa Fenicha - Dhizaini magazini
Kufambisa Fenicha Dzimba dziri kukura diki, saka vanoda lightweight fenicha izvo zvinoenderana. Iyo Dotdotdot.Frame ndiyo yekutanga nhare, yakajairika fanicha fenicha pamusika. Inoshanda uye yakakomberedza, iyo furemu inogona kuturika kumadziro kana kuisamira kuti ishandiswe nyore kutenderera pamba. Uye itsika yekuita zvinhu inouya ichibva pamakomba makumi manomwe uye iri kuwedzera nhumbi dzekugadzirisa mukati mavo. Shandisa imwe kana kujoina akawanda masisitimu pamwechete sezvinodiwa - pane kusangana kusingaperi kunowanikwa.
Zita rechirongwa : dotdotdot.frame, Vagadziri zita : Leonid Davydov, Izita remutengi : dotdotdot.furniture.
Kufambisa Fenicha Leonid Davydov dotdotdot.frame